Rikoooo.com - Operatera mpitatitra entana
Board index Ny Terminal Media anao Videos
Ity no toerana handefasana ireo horonantsary nalaina tao amin'ny simulator sidinao, ka mamorona. :)
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 26 Jan 2017, 20:09
dia mahazo fotoana sasany amin'ny manidina ny Tomcat
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by superskullmaster » 27 Jan 2017, 04:04
Andramo izany amin'ny F-35 Dino.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 27 Jan 2017, 04:07
ianao dia miresaka amin'ny mpankafy Die-Hard Tomcat, izay mankahala mafy ny F-35. tsy maninona no nanao an'iny (ary TSY AZO ATAO amin'i Dino satria azony izy MAHALALAZA!). Tsy tiako ny F-35 amin'ny rl na lalao lol
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by superskullmaster » 27 Jan 2017, 21:23
Amiko dia manangana ny elatry ny Centre ho azy aho, ary na dia tsy F-22 aza izy io dia tsy natao akory. Rehefa mahatsapa ny olona fa fomba anaovana ny iraka dia tsy mitovy amin'ireo mpiady lova ka mety hanana fitiavana bebe kokoa an'io ry zareo. Jereo ity fomba ity, ny F-15 dia haingana kokoa noho ny famoronana noho ny F-22 (noho ny fiheverana amin'ny halatra) fa mbola ambany noho ny lafiny rehetra (afa-tsy ny sakana). Ny B-1A dia haingana noho ny B-1B fa ny B kosa dia tsara kokoa amin'ny lafiny hafa. Ka voatery mamoy zavatra ianao indraindray mba hahazoana olona.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 29 Jan 2017, 22:52
Efa antitra aho somary lol Dia ho lehilahy Tomcat aho amin'ny andro hahafatesako. Ankehitriny raha tiako indrindra ny ankamaroan'ny Helos .... Tena tiako ny osprey. tsara indrindra amin'ny tontolo roa ao amin'io zazakely io (miaraka amin'ny hatsarana mahafinaritra hatsaram-panahy).
Amiko marina dia tsy mandany fotoana be amin'ny zavatra hafa afa-tsy i jumbos lol
Hiverina amin'ny "Video"